LGBT အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်မှုအပြည့်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံများ
နိုင်ငံအလိုက် Human Rights(လူ့အခွင့်အရေး) ဆိုတာရှိသလို Lesbian, Gay, Bisexual နဲ့ Transgender စတဲ့ LGBTs တွေအတွက် LGBTs Rights ဆိုတာလည်း ရှိကြပါတယ်။
နိုင်ငံအလိုက် Human Rights(လူ့အခွင့်အရေး) ဆိုတာရှိသလို Lesbian, Gay, Bisexual နဲ့ Transgender စတဲ့ LGBTs တွေအတွက် LGBTs Rights ဆိုတာလည်း ရှိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံတွေ အကုန်လုံးမှာ LGBTs Rights ကို ကာကွယ်မှုအပြည့်ပေးထားတာကို မတွေ့ရသေးပေမယ့် LGBT Rights ကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာလဲ? ဘယ်တုန်းကစတာလဲ? ဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေပေးထားလဲ? ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
နော်ဝေနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်က လိင်ခံယူချက်အပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံတာအပါအဝင် လူ့အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဥပဒေကိုမျိုးကို ပြဌာန်းခဲ့တာနော်ဝေနိုင်ငံက ပထမဆုံးပါပဲ။ (၂၀၀၉) ခုနှစ်ကတည်းက လိင်တူချင်းလက်ထပ်တာ ၊ကလေးမွေးစားတာတွေကို တရားဝင် ပြုလုပ်ခွင့်ပေးထားတာပါ။နိုင်ငံသားတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူချက်ကို တရားဝင် ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၈၂ ကြားကာလဟာ UK တလွှားမှာ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတွေအဖို့ အတော်လေးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ် ကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ UK ဟာ LGBTs တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ လူလွတ် LGBTs တွေဟာ အများနဲ့တန်းတူ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး လိင်ပြောင်းလဲ ခံယူမှုတွေကိုလည်း တရားဝင် ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်နဲ့ ဝေး ပြည်နယ်တွေမှာ လိင်တူချင်း ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုကို တရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ လိင်တူအချင်းချင်း ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ လိင်တူချစ်သူတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ် UK နိုင်ငံရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
Gay Friendly အဖြစ်ဆုံး နိုင်ငံလို့တင်စားရတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက လိင်တူချင်းထိမ်းမြားလက်ထပ်တာက တရားဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လိင်ပြောင်းလဲခံယူမှုကိုတော့ အသက် (၁၆) နှစ်ပြည့်ပြီးတာနဲ့ တရားဝင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး (၁၆) နှစ်အောက်တွေကတော့ လိင်ပြောင်းလဲ ခံယူဖို့ မိဘခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တော့ရှိပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုတဲ့ မှတ်ပုံတင်ပေါ်မှာ Gender Status အတွက် ကျားနဲ့မအပြင် LGBTs တွေအတွက် " X " သင်္ကေတကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံက မြို့တွေဖြစ်တဲ့ Ottawa, Toronto, Vancouver, and Montreal မြို့တွေမှာ လိင်တူချစ်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Gay Village တွေတောင်ရှိပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံက LGBTs တွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အများစုရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံလာရတာက ၂၀ရာစု အစပိုင်းလောက်မှာပါ။၁၉၇၉ ခုနှစ်ကစလို့ လိင်တူအချင်းချင်း ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုလာပြီး လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုက ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ စပိန်နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံက အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ စပိန်နိုင်ငံသား ၉၀% က LGBTs တွေကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက အသိအမှတ်ပြုသင့်ကြောင်း ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်းက ဘာစီလိုနာမြို့ဟာ လိင်တူချစ်သူတွေကို အကောင်းဆုံး ထောက်ခံမှုပေးတဲ့ မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံကို ပြင်သစ်က ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး Napoleonic Code ကို ချမှတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၈၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးဟာ တရားဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Napoleonic Code ဆိုတာကတော့ လူ့အဆင့်အတန်းခွဲခြားတဲ့ ဥပဒေရပ်ကို ဖြုတ်ချပြီး လိင်တူအချင်းချင်း ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို တရားဝင်ခွင့်ပြုတာကို ဆိုလိုတာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လိင်တူချစ်သူတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ အရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။၂၀ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတော့ လိင်တူချစ်သူတွေကို အသိအမှတ်ပြုလာပြီး ၁၉၇၃ မှာ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်နှစ်သက်တာကို စိတ်ရောဂါတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကနေ ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ နယ်သာလန်ဟာ လိင်တူချစ်သူတွေ ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုကို တရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ LGBTs တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲကမှ (၅)နိုင်ငံအကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။